В 2020 году Дагестан дополнительно направит на мелиорацию 300 млн рублей — Картофельная Система
Ngo-2020, i-Dagestan izokwengeza ama-ruble ayizigidi ezingama-300 ukuze iphinde inyuswe
Lesi silinganiso, ngokusho kweNhloko yeRiphabhulikhi yaseDagestan, uVladimir Vasiliev, sizonciphisa izinkinga ngokunisela okubangelwa ukuncipha kwemvula.
“ENingizimu ye-republic, inani lezulu liyancipha ngokushisa kwesimo sezulu, futhi lokhu kuholela ekwandeni kwalesi simo ngokutholakala kwamanzi okunisela. Ngakho-ke, ngonyaka owedlule sabela, kunanini ngaphambili, ama-ruble ayizigidi ezingama-500 zokubuyiselwa komhlaba kabusha, kepha lokhu akwanele, ngoba izinkinga bezilokhu ziqongelela kule ndawo amashumi eminyaka. Kulo nyaka sihlele amanye ama-ruble ayizigidi ezingama-300, ”kusho uVladimir Vasiliev emhlanganweni nabezindaba.
Kumele kuqashelwe ukuthi imali ekhonjisiwe ihlelwe ukuthi iqondiswe ikakhulu ekuphuculeni amanethiwekhi wokuvuselelwa kabusha epulazini. Ikakhulu, abalimi bazobe belungiselela futhi bavikele amaphrojekthi wabo wokuvuselela umhlaba, okuthi uma evunyiwe, axhaswe ngemali yesabelomali sesifunda.
Khumbula ukuthi ngonyaka ka-2019 eDagestan, inethiwekhi yokuvuselelwa kabusha endaweni eyihektare eyizinkulungwane eziyi-17 yabuyiselwa futhi yakhiwa kabusha ngokwesisekelo sezobuchwepheshe besimanje, okwenze kwaba nokwenzeka ukuthola okukhishwayo okwengeziwe kwezolimo okubiza ngaphezu kwama-ruble ayizigidi eziyinkulungwane.
Tags: IDagestanUkunisela komhlabaukwanda kokukhiqizwa kwezolimo
Abakhiqizi bemifino bathi inqubomgomo yamanani okuthengisa angalungile
Ukuvikela nokukhuthaza imbewu yamazambane ngesikhathi sokutshala
Umkhankaso wokuvuna uyaqhubeka emikhakheni yaseDagestan
Ukuhlola izinhlobo kanye nzalo yezitshalo zemifino ekhethiwe yaseRussia
Esifundeni saseBryansk kukhona okutshala amazambane
Umcimbi wezimboni wamazwe omhlaba "Imboni Yamazambane 2020" uzobanjwa!
Abalimi bangabhekana nezinkinga ngenxa yokulawulwa ngokweqile kwembewu engeniswayo